युगसम्बाद साप्ताहिक - नेताहरूको स्थिति र यहाँको राजनीति -महेश्वर शर्मा
Saturday, 04.04.2020, 01:04am (GMT+5.5) Home Contact
नेताहरूको स्थिति र यहाँको राजनीति -महेश्वर शर्मा
Tuesday, 11.13.2012, 05:23pm (GMT+5.5)
राजनीति एक प्रकारको बुद्धिकै खेल हो । त्यसैले यसलाई कूटनीति पनि भनिन्छ । बुद्धिचाल खेल्दा पछि चाल्नुपर्ने गोटीको हिसाब पहिले नै गर्न जानिएन भने हार्न बेर लाग्दैछ । यहाँ राजनीति गर्छौं भन्नेमा अनाडीहरू धेरै हुनाले तिनीहरूले देश डुबाइसके । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नजानेर त्यसका परिणामले पिर्न थालिसकेका छन् । देश र जनताको हित हुने प्रश्नमा पनि मिलेर काम गर्न सक्दैनन् र एउटाले अर्काको जरै उखेल्न खोज्छन् । अहिले देशको वार्षिक बजेट च्याँखेमा छ । त्यो कसले बल्झाउने हो ठेगान छैन ।
नेताहरूका स्थिति अहिले कस्तो छ भने आफूले बदमासी गरेको ठीक र अरुले गरेको बेठीक । आफूले मात्र चोर्न पाउनुपर्छ, अरुले चोर्न पाउनु हुँदैन । नेतृत्व मेरो मात्रै हुनुपर्छ, अरुको हुनुहुँदैन । आफूले गरेको भ्रष्टाचार सदाचार हो र अरुले गरेको मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ । सत्तामा सधैं आफैं मात्र बस्न पाउनुपर्छ, अरु होइन । त्यो पनि जनतामा गएर होइन, बलजफत सत्ता हत्याएर । यस्तो भएपछि देशको हालत के हुन्छ ? हामीले भोगिरहेकै छौं ।
त्यसैले देश अहिले अराजकताको हुन्नरीमा छ । सत्ता हत्याउने बाहेक अरु कुनै सोच नेताहरूमा पाइँदैन । अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारलाई नै ‘गणतन्त्र’ सम्झनुपर्ने बाध्यता छ । एमाओवादीले आफूलाई विना टीकाको राजा ठान्न थालेको छ भने विपक्षी कांग्रेस र एमाले आन्दोलन गरेर सडकबाटै बाबुराम फाल्छौं भनेर ताइँ देखाइरहेका छन् । विधि विधान, नियम कानुन कसैलाई चाहिएका छैनन् । सहमतिको भ्यागुते ट्याइँट्याइँ र संघर्षको फुइँको जनताले कुनै अर्थ देखेका छैनन् । नेताले स्वार्थतन्त्र मात्र देखाइरहेका छन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई त यिनीहरूले उसै दिन विसर्जन गरेका हुन् जुन दिन आफूखुसी संविधानसभाको म्याद थपेर पनि संविधानसभाको हत्या एवं जनमतको अवज्ञा गरेका थिए ।
राजनीतिक दलको काम जनताका पक्षमा राजनीतिक परिचालन गर्ने र जनतालाई जागरुक बनाउने हो, दलहरू नै जनप्रतिनिधि होइनन् । दलहरूले आफूलाई जनताका प्रतिनिधि ठान्छन् भने त्याने भ्रम हो । दलहरू मिलेर संविधान संशोधन गर्न या बनाउन सक्छौं, संसदकै म्याद थप्न र मरेको संसद ब्यूँताउन सक्छौं भनिन्छ र त्यस्तो प्रावधान कतै राखिएको छ भने त्यो तानाशाही काम हो । जनप्रतिनिधि हुन त जनताबाटै चुनिएर आउनुपर्छ । नत्र त निर्वाचन आयोग, निर्वाचन केही पनि चाहिने थिएन । दलहरूले आफ्ना मान्छे सोझै पठाएर त्यसैलाई संसद भने भैहाल्यो नि । त्यस्तै समानुपातिक भनेका पनि वास्तविक जनप्रतिनिधि नभएर दलका मात्र प्रतिनिधि हुनाले संसदमा समानुपातिकका नाममा पठाउनु प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मान्न सकिंदैन । विगत संविधानसभामा गएका समानुपातिक मध्येका कतिपयले कूटनीतिक राहदानी बेन्चे, बलात्कार गर्ने, घूस माग्ने, अपहरण गर्ने जस्ता अपराधकर्म गरेर प्रजातन्त्रकै उपहास गराए । आज देश त्यस्तै स्थितिबाट गुज्रदैछ ।
लुटपाट मच्चाउने, बम पड्काउनु, तोडफोड र आगजनी गर्नु जस्ता ध्वंशात्मक काममा दिक्षितहरूबाट शासन व्यवस्था राम्रो चल्न नसक्नु स्वाभाविक हो । त्यस्ताहरूबाट निर्माण होइन ध्वंश मात्र हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि पत्याउनु आफ्नै कमजोरी हो । त्यस्ताहरूले जनताको अज्ञानताको फाइदा लिइनै रहेका छन् । स्वेच्छिक अवकाशका नाममा ५–८ लाख बुझेर गएकाहरूलाई लुट्ने स्वतन्त्रता छँदैछ । तिनीहरू नै ठाउँठाउँमा हतियार सहित पक्राउमा परिरहेकै छन् । अब चुनावमा पनि तिनीहरूले नै कमाल देखाउने होलान् । देश जेसुकै होस्, आफू मात्रै बन्नुपर्छ भन्ने सोच भएकाहरू नै नेतृत्वमा रहनुको दुष्परिणाम हो यो । शान्ति प्रक्रियाको यो नयाँ मोडेल पनि नेपालले नै प्रस्तुत गर्ने भयो ।
अहिले यहाँ जातीय राजनीतिलाई चर्को रुपमा उठाइएको छ । जातीय राजनीति माक्र्सवाद विरोधी राजनीति हो । माक्र्सवादले शोषक र शोषित वर्ग बाहेक अरु जाति, वर्ग, धर्म, भाषाको आधार लिंदैन । जात–धर्म र भाषाका आधारमा गरिने जातीय राजनीतिले समाजलाई विभाजित र छिन्नभिन्न पार्छ भन्नेहरू नै यहाँ जातीय राजनीति गर्न तम्सेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । यिनीहरूले पहिचानको राजनीति भनेकै जातीय राजनीति हो । तर यहाँ मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने गर्न खोज्दैछन् । पहिचान त प्रत्येक जातको छँदैछ नि । ‘नेपाली’ हुनु नै मूल पहिचान र सबैको आआफ्नो उपपहिचान त्यसै पनि सर्वस्वीकृत र सर्वमान्य छँदैछ भने फेरि यो जातीय पहिचानको रडाको किन ? बुझिनसक्नु छ ।
यो सबै विदेशी हस्तक्षेपको दुष्परिणाम हो । नेपालीलाई जात, भाषा र धर्मका आधारमा टुक्र्याएर छिन्नभिन्न पारिदिने चक्रचाल नबुझेर यहाँ गल्ती भैरहेको छ । पहिचानकै कुरा लिएर पार्टीहरू धमाधम फुटिरहेका छन् । यसको अर्थ के अब कम्युनिष्टले माक्र्सको विचार छोड्न खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यतिबेला सोझै जातीय नभनेर पहिचान शब्द जोडे पनि नियत चाहिं जाति, भाषा र धर्मको आधारमा विभाजन गर्न खोजेको स्पष्ट छ । यस्ता रहस्यमय माग त्यसै आएका छैनन् । यी आयातित माग हुन् । देशप्रति माया ममता हुनेहरू सावधान हुनुपर्ने अवस्था छ ।
हामी सबैले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने देशको विकास गर्न र आफूलाई उठाउन यहाँ कसैले कसैलाई रोकेको वा वाधा पु¥याएको स्थिति छैन । तैपनि बाहिरी तत्वका उक्साहटमा कताकति स्वार्थले पनि काम गरेको हुनसक्छ । सोझासिधा जनतालाई नहुने सपना देखाएर भ्रम पार्नेहरूबाट हामी सबै सावधान हुनुपर्ने अवस्था छ ।